သွားမျက်နှာ ပြင်ပေါ်တွင်ကြွေ လွှာကပ်ခြင်း | D Royal Dental Clinic
Porcelain Veneer or Hollywood Smile(Celebrity Smile)
(သွား မျက်နှာ ပြင်ပေါ်တွင် ကြွေ လွှာကပ်ခြင်း )
တိုး တက်ပြောင်း လဲနေတဲ့ ခေါတ် ကြီး ထဲ မှာ သွား အလှ အပကို ဦးစား ပေး လုပ်ဆောင် လာကြပါပီးခင်ဗျာ ၊ နေ့စဉ် လှုပ် ရှား သွား လာ နေတဲ့ပတ်ဝန်း ကျင်မှာ မိမိ သွားက အကြောင်း တစ်ခု ခု ကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကား ပြော လို့ စနောက်ခံရ တဲ့အခါ မှာ၊ လုပ်ငန်း အကြောင်း ဆွေး နွေး တဲ့အခါ မှာ ရယ်ရယ်မော မော ပြုံး ဖို့ ယုံကြည်ချက် ကင်း မဲ့နေပါသလား ။????
နည်း ပညာ တိုးတက် လာ တာ မျှ နဲ့ အတူ မိမိ နှစ်ရှည် လများ ခံစား နေရတဲ့ ပြဿ နာ ကို ဖြေ ရှင်း ဖို့ အတွက် အရင်တုန်း က လို သွား ပြင်ချင် ရင် သွား တစ်ချောင်း လုံး စွပ် ပီး စား စရာ မလို တော့ ပဲ မိမိသွား ရဲ့ အရှေ့ မျက် နှာ ပြင် ကို သာအနည်းငယ်စား ပီး သွားမျက်နှာ ပြင်ကို ကြွေလွှာကပ်တဲ့ နည်းပညာ ပေါ် လာ ပါ ပီးခင်ဗျာ ။အချိန် က ၃ ရက် ရက် သာ စောင့်ဆိုင်း ရတဲ့အတွက် မိမိ ရဲ့ သွားအလှ ဟာ မျက် လှည့် ပြ လိုက်သလို ပြောင်း လဲသွားမှာဖြစ်ပါသည် ။????
သွား ကြွေ လွှာကပ် ခြင်း ကို Hollywood smile (celebrity smile) လို့ ခေါ် ရတဲ့အကြောင်း အရင်း က Celebrity တော်တော် များ များ တော်တော်များ များ လုပ်ကြလို့ပါ ။
သူ တို့ ဘာလို့ကြွေ လွှာကပ်တာ လဲဆိုတော့ Celebrity ဖြစ်လို့ အချိန်တို တို အတွင်း နဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အပြုံး ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ဖို့ ပါ ။????
မိမိ ကိုယ်ကို မိမိယုံ ကြည် ချက် ရှိ ရှိ နဲ့ ရယ်ရယ်မောမော ပြုံး လိုက်တိုင်း မှာ သွားတွေ ဖြူ ပီး ပု လဲ လုံးလေး တွေ တန်း စီထား သလို အလှ ပိုင်ရှင် ဖြစ်စေ ဖို့ အတွက် Porcelain Veneer (ကြွေလွှာကပ်ခြင်း) ကအကောင်း ဆုံး ရွေး ချယ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။????
သွားကြွေလွှာ ကပ် ခြင်း အတွက်သတင်းကောင်း
သွားကြွေလွှာကပ်ခြင်း ကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ စွာကု သနိုင်ရေး အတွက် နို ဝင်ဘာ တစ်လ အတွင်း 20% promotion ပေး သွား မှာဖြစ်ပါသည်။
ကြွေလွှာကပ်ခြင်း ကို ဘယ်သူ တွေလုပ်သင့်ပါသလဲ ။
(1) သွား ကျဲသူ တွေ သို့မဟုတ် သွားကျဲတာ ကို လေဆာ နဲ့ သွားဖာထားသောလည်း ခနခန ပြုတ် တဲ့သူ တွေ၊နှစ်ကြာ လာ လို့ သွားဖာထားတာ ဝါညစ်ညစ်ဖြစ်ပီး ခနခန မဖာ ချင်တဲ့သူ တွေ။
(2) သွား size သေး သေးလေး ကို မကြိုက်တဲ့သူ တွေ။
(3)Tetracycline staining ကြောင့် သွား ဝါ သွား ညို တဲ့သူ တွေ ၊မျိုး ရိုး ကြောင့် သွားဝါ သွား ညို နေတဲ့သူ တွေ
(4)သွား အနည်း ငယ်ပဲ့နေတဲ့သူ တွေ။
(5)ရှေ့သွားတွင် သွားပိုးစား ခြင်း ကြောင့် သွားအရောင်ပြောင်း နေတဲ့သူ တွေ။
(6)သွား အနည်း ငယ် ထပ်နေတဲ့သူ တွေ အတွက်သင့်လျော့ပါတယ် ။
Porcelain Veneer ရဲ့အား သာ ချက်များ ကတော့????????????
(1)ကြိုက်သည့် အရောင် ၊ ကြိုက်သည့် သွားအရွယ်အစား ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေး ချယ်နိုင် ခြင်း ။
(2) နှစ်ဘယ်လောက်ကြာ ကြာ အရောင်လုံး ဝ ပြောင်း လဲသွား ခြင်း မရှိ ခြင်း ၊ coffee ၊ tea၊ Pepsi၊ Coca cola ၊ Coke စသည့် အစွန်း အထင်း ဒဏ် ကို ခံနိုင်ခြင်း ။
(3)သေချာ ဂရု စိုက် ရင် ဆယ် နှစ်ကျော် နှင့် အထက်ခံနိုင် ခြင်း ။
(4)ကြွေ လွှာရဲ့ အသွင်အပြင်ပိုင်း ကလည်း တကယ့်သွား ကြွေလွှာ ရဲ့မျက်နှာ ပြင်နဲ့ ခွဲ မရအောင်တူ လွန်း ခြင်း။
(5) သွား မျက်ပြင် အနည်း ငယ်သာ စား ရ၍ သွားပျက်စီးမှုသိပ် မရှိခြင်း ၊
(6)3shape communicate software ကို အသုံးပြုခြင်း ဖြင့် မိမိသွားကို အမှန် တကယ်ကြွေ လွှာ မကပ်မီ 2D 3D ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် ကြည့် ခွင့် ရသဖြင့် စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေခြင်း ။
အားနည်း ချက် များ????????????
(1)နောက်ဆုံး ပေါ် နည်း ပညာ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ (Cad-Cam) Technology ကို အသုံး ပြု ထား ပါသဖြင့် ကုန် ကျစရိတ် အနည်း ငယ် များ ပါတယ်။
(2)အလှ အပ ကို ဦး စားပေး ထားသော ကြောင့် အမာ ကိုက် လို့ မရပါ ။ပဲ့တတ်ပါတယ်။
(3)အံကြိတ် တဲ့အလေ့အကျင့် ရှိရင် ကြွေလွှာကပ်၍ လုံးဝမသင့်တော်ပါ ။
(4)Moderate or severe crowding တွေ မှာ တော့ Veneer ကပ် ရင် မသင့်တော်ပါ ။
ခု ချိန် မှာ တော့ နိုင်ငံ ရပ်ခြား ကို တကူး တက သွား ရောက်ကုသ စရာ မလို တော့ပဲ ကျွန်တော်တို့ D- Royal သွားဆေး ခန်း မှာ ကုသ မှု ခံယူ နိင်ပီး ဖြစ်ပါသည် ။
အသေး စိပ် အချက် အလက် နှင့် ဈေး နူန်း များ သိ လို ပါ က Chat box တွင် သေ သေ ချာ ချာ ရှင်း ပြပေး မှာ ဖြစ်ပီး ဆွေး နွေး လို သူ များ နှင့်ကု သမှု ခံယူ လို သူ များ ကိုအချိန်ပေး ရှင်း ပြ ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဆေးခန်း တွင် Appointment ကြို ယူ စေ လို ပါသည် ခင်ဗျာ ။
Free for Discussion :)
Address : အမှတ်(၅၀)၊ မြေညီထပ် ၊ အလယ်ဘလောက် ဌာနာလမ်း၊နတ်စင်လမ်းဘေးကပ်လျက်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊
ကမ်းနားလမ်း နှင့်ပို နီး ၊ လမ်း ထိပ်တွင် မြန်မာ့ ရှေ့ဆောင် ဘဏ်ရှိ ။